Ho fiarovana ny voly : hamboarina hanara-penitra ny tohodrano, lakandrano, fefiloha | NewsMada
Ho fiarovana ny voly : hamboarina hanara-penitra ny tohodrano, lakandrano, fefiloha
Manome fiofanana ho an’ny mpampiofana ny CPGU*, sampana ao amin’ny Primatiora, misahana ny fisorohana ny vokatry ny loza ka miantraika any amin’ny fambolena. Ny 13 nitohy omaly 14 novambra izany fiofanana izany, eto an-dRenivohitra, niantsoana ireo teknisianina avy amin’ny fambolena sy miandraikitra ny fotodrafitrasa (Genie rurale).
Faritra voasokajy ho sompitr’i Madagasikara kendrena amin’izao fampiofanana izao Alaotra, i Sava, i Boeny ary i Menabe. Ho an’ny Faritra Sava sy Menabe aloha ny andiany voalohany niantsoana teknsianina avy amin’ny fambolena sy ny fotodrafitrasa, hisorohana na hampihena ny voka-dratsy noho ny tondradrano na loza voajanahary hafa manapotika ny fambolena. Anomezana azy ireo fiofanana ny momba ny fanamboarana sy fikajiana fotodrafitrasa, toy ny tohodrano, lakandrano, fefiloha.
Ho an’ireo toerana efa nisy ka efa antitra, atao izay hanarenana azy ireny hanara-penitra; ary hanamboarana vaovao hanara-penitra any amin’ireo toerana tsy mbola misy. Tanjona izany ny hahitana tohodrano, lakandrano na fefiloha afaka miaro tsara ny voly amin’izay mety fihohotsaky ny tany na tondradrano. Tsy maintsy arahina teknika mazava ny fanamboarana azy ireny, hialana amin’ny asa zara fa vita, miteraka fatiantoka goavana : vola very, voly tsy avotra.
Miara-miasa amin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ny CPGU. Efa nisy ihany karazana tetikasa roa mitovitovy talohan’izao, natao ho fiarovana ny fambolena ihany. Tena andrasana izany ny fanarenana na fanamboarana fotodrafitrasa vaovao ho an’ny tontolon’ny fambolena, izay hita tokoa fa tsy ampy na efa simba ny maro eto an-toerana.
CPGU* : Cellule de prévention et de gestion des urgences.